Mma: Chọpụta, Gbochie na Deter Pịa wayo | Martech Zone
Pịa wayo na-aga n'ihu na-agbasakarị na ịkwụ ụgwọ kwa ụlọ ọrụ. Gịnị bụ pịa wayo? Pịa wayo na-eme mgbe mmadụ, edemede akpaghị aka ma ọ bụ mmemme kọmputa na-eitomi onye ọrụ ziri ezi nke ihe nchọgharị weebụ na ịpị mgbasa ozi. Pịa igwu wayo emee na-ekwesịghị ekwesị na-abawanye revenue maka usu saịtị ma ọ bụ igbapu ụgwọ kwa click mmefu ego nke a osompi. Pịa aghụghọ na-aga n'ihu na-abụ isiokwu nke ụfọdụ esemokwu na ịba ụba ịgba akwụkwọ n'ihi netwọkụ mgbasa ozi bụ ndị isi na-erite uru nke aghụghọ ahụ.
Ụdị dị ka Mma nwere algọridim iji chọpụta, gbochie ma gbochie pịa aghụghọ. Atụmatụ kachasị ọhụrụ site na Pịa Forensics na Anchor Intelligence na-ekwu na 17-29% nke clicks na mgbasa ozi akwụ ụgwọ bụ aghụghọ. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka pịa ahụ, ha agaghị ebute ntụgharị.
Jiri nlezianya na-enye atụmatụ ndị a
Etechọpụta pịa wayo ka ọ na-eme - Mgbe ị na - agbaso mgbasa ozi gị nke ọma, ị nwekwara sistemụ nlekota ha na - enyocha ogo nke mgbasa ozi ọ bụla, awa 24 kwa ụbọchị. Ma ọ bụ oke na-abụghị ịtụgharị clicks si mba ụfọdụ, ma ọ bụ onye asọmpi na ịpị mgbasa ozi gị, Mma nwere ike ịchọpụta ma gwa gị nke ọrụ enyo ozugbo.
Naghachi ego furu efu na mgbasa ozi PPC gị - Mgbe ọ bụla pịa wayo achọpụtara, Mma ga-akwadebe a akụkọ na niile nkọwa na ị chọrọ iji kọọ ihe merenụ na saịtị ahụ ma ọ bụ search engine na ị kpọsara na. Nkwupụta wayo gụnyere adreesị IP, ọnọdụ, na-ekwu banyere URLs na ụbọchị na oge nke ndekọ enyo ọ bụla edere.
Gbochie ma gbochie cliclic wayo - Ndị asọmpi na ndị mmekọ na ịpị mgbasa ozi gị iji kpoo mmefu ego gị nwere ọtụtụ ihe ga-efunahụ ma ọ bụrụ na ejide ha ma kọọrọ ha. Mee ka ha mara nke ọma na ị maara ọrụ ha site na izipu clicks na-enyo enyo na ibe ịdọ aka na ntị kama weebụsaịtị gị. Anyị na-enyekwa ha adreesị IP ha na ntuziaka iji gbochie mgbasa ozi Google ma ọ bụ Bing gị maka igosipụta ha n'ọdịnihu.
Ngosipụta: Anyị na-egosipụta njikọ njikọta na ntanetị a. I nwekwara ike ahu nagide Mma na Segment.io
Tags: pịa wayommakwụọ ụgwọ kwa Pịaịpị pịappcNgalaba.io